Ungahambisa isicelo sokubuyiselwa imali kungakapheli izinsuku eziyi-15 ngemuva kokulethwa kwe-oda. Ungakwenza ngokusithumela i-imeyili.
Uma ungazange uthole umkhiqizo ngesikhathi esiqinisekisiwe (izinsuku ezingu-60 zingafaki ukucubungula kwezinsuku ezingu-2-5) ungacela ukuthunyelwa kabusha. Uma uthole into engalungile, ungacela ukubuyiselwa imali noma ukuthunyelwa kabusha. Uma ungawufuni umkhiqizo owutholile ungase ucele ukubuyiselwa imali kodwa kufanele ubuyisele into ngezindleko zakho futhi izindleko zokuthumela zento zizodonswa enanini lembuyiselo, into kufanele ingasetshenziswa futhi inombolo yokulandelela okudingekayo.
Uma ngasizathu simbe ungathanda ukushintshanisa umkhiqizo wakho, mhlawumbe ngosayizi ohlukile ezingutsheni. Kufanele uxhumane nathi kuqala futhi sizokuqondisa ngezinyathelo. ** Sicela ungathumeli ukuthenga kwakho kithi ngaphandle kokuthi sikugunyaze ukuthi wenze njalo.